दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २५ गते सोमबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर ११ - Sutra TV Sutra TV
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २५ गते सोमबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर ११
मेष : ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। प्रेम यात्रा मीठो तर छोटो हुनेछ। सहकर्मीहरूलाई सँभाल्दा कुशलताको आवश्यकता पर्नेछ। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन्, जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। आफ्नो जोडीको जरुरी कामले गर्दा तपाईंको दिनको योजना बिग्रिन सक्छ, तर अन्तमा तपाईंले यो राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
वृष : मानसिक शान्तिको लागि केही दान र पुण्यको काममा आफूलाई समावेश गर्नुहोस्। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि, तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। आज तपाईं उपस्थित हुने एउटा सामाजिक सभामा आकर्षणको केन्द्र बन्नु हुनेछ। भेटघाटको मिति कार्यक्रम असफल हुन सक्ने हुनाले निराशाको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना लिनु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। गलतफहमीको नराम्रो चरण पछि, साँझसम्ममा तपाईंको जोडीको प्रेम पाउनुहुनेछ।
मिथुन : स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस र वस्तुहरू क्रमबद्द राख्नुहोस्। हल नभएका मुद्दाहरू कठिन बन्नेछन् र खर्चले तपाईंको मन मन ढाक्नेछ। छिमेकीसँग झगडा गर्नाले तपाईंको मुड बिग्रिन सक्छ। तर आफ्नो स्वभाव नबिगार्नुहोस किनभने यसले मात्रै आगोमा इन्धन थप्ने काम गर्दछ। तपाईंले सहयोग दिनु भएन भने तपाईंसँग कसैले झगडा गर्न सक्ने छैन। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं प्रेममा बिस्तारै तर निरंतर जल्नु हुनेछ। तपाईंले नगर्ने कुरा अरूलाई जबरजस्ती गराउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। नियमित रूपमा आफ्नो जीवनसाथीलाई चकित गराउनुहोस्, अन्यथा उसले महत्वहीन महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ।
कर्कट : आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। व्यस्त र तनाउपूर्ण यात्रा गर्नुहोस्, तर आर्थिक फाइदा भने होस्। अनपेक्षित जिम्मेवारीले तपाईंको दिनको योजना विग्रिनेछ, तपाईंले आफैलाई अरूलाई धेरै र आफ्नो लागि कम गरिरहेको पाउनुहुनेछ। आफ्नो प्रेमी जीवनमा तीतो तुच्छ कुराहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। साझेदारीमा नयाँ उद्यम सुरु गर्नको लागि राम्रो दिन। सबैलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। तर साझेदारसँग मिलेर काम गर्नु अगाडि सोच्नुहोस्। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुनः आकलन गर्ने समय। आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
सिंह : मनोरञ्जन र आनन्दको दिन। व्यस्त र तनाउपूर्ण यात्रा गर्नुहोस्, तर आर्थिक फाइदा भने होस्। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। व्यस्त सडकमा तपाईंले आफुलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्नुहुनेछ किनकि तपाईंकी प्रियतमा सबैभन्दा राम्री छन्। आज तपाईं उपस्थित भएका व्याख्यान र सेमिनारले विकासको लागि नयाँ विचार ल्याउनेछन्। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। विवाह दैवले मिलाउँछस आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई यो साबित गर्नेछन्।
कन्या : पत्नीका मामिलाहरूमा आफ्नो नाक नबजाउनुहोस् किनकि यसले उनको रिस निम्त्याउन सक्छ। आफ्नो काम गरिरहनु ठीक हो। सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्नुहोस् अन्यथा यसले निर्भरताको सिर्जना गर्न सक्छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि सही दिन। घरेलु मुद्दाहरूमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। यस दिन तपाईं वरिपरि गुलाबको खुशबू हुनेछ। प्रेमका परमानन्दको आनन्द लिनुहोस्। राम्रो पेसा सम्भावनाहरुको गरिएको यात्राले सफलता पाउनेछ। आफ्ना अभिभावकहरूको अनुमति लिनुहोस्, अन्यथा तिनीहरूले पछि आपत्ति गर्न सक्छन्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ ।
तुला : खेल र अन्य बाहिरी गतिविधिमा सहभागी हुनाले तपाईंलाई आफ्नो हराएको ऊर्जा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। निवास परिवर्तन गर्नु अत्यधिक शुभ हुनेछ। तपाईंले प्रेमको पीडा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्। कार्यक्रमहरू राम्रा र समस्यापूर्ण हुने दिन, जसले तपाईंलाई भ्रमित र थकित छोड्नेछ। आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
वृश्चिक : आफुलाई शान्त राख्न मद्दत गर्ने गतिविधिहरुमा आफैलाई संलग्न गर्नुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। परिवार खुशी र शान्ति छ जस्तो देखिंदैन। कसैको लागि नयाँ रोमान्स निश्चित देखिन्छ, आफ्नो प्रेमले तपाईंको जीवन फूलाउनेछ। रचनात्मक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि सफल दिन, किनकि तिनीहरूले लामो प्रतीक्षा पश्चात ख्याति र पहिचान पाउने छन्। घरमा संस्कार, हवन, शुभ समारोह गरिनेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन होस तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
धनु : आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आज तपाईंलाई प्रदान गरिएका लगानी योजनाहरुमा तपाईंले दुई पटक हेर्नुपर्छ। मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको अधिकांश समय लिनेछन्। विगतका रमाइला सम्झनाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछ। व्यापार सभाहरूमा फरासिलो र भावनात्मक नहुनुहोस्, तपाईंले आफ्नो बोली नियन्त्रण गर्नु भएन भने सजिलैसँग आफ्नो प्रतिष्ठा बिगार्न सक्नुहुन्छ। तपाईंमध्ये कसैले टाढाको यात्रा गर्नुहुनेछ, यो धेरै व्यस्त हुनेछ, तर अत्यधिक फलदायी पनि हुनेछ। तपाईंको पुरानो साथी आउनेछ र आफ्नो जोडीसँग तपाईंले बिताएका पुराना सुन्दर सम्झनाहरुको सम्झना गराउन सक्छ।
मकर : सबै कुराहरू तपाईंतो इच्छा अनुसार अगाडि बढेकोले धेरै खुशीयाली भरिएको दिन। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। आजको दिन नजिकका आफन्त वा साथीहरूले राम्रो समाचार दिएबाट सुरु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो साथीको प्रेम साँच्चै आत्मीय रहेछ भनेर आज थाहा पाउनु हुनेछ। मालिकको राम्रो मुडले काममा सम्पूर्ण वातावरण कर्ममय बनाउन सक्छ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले हेप्नेछन् र यसले गर्दा तपाईंले विवाह जबरजस्ती तोड्न सक्नुहुन्छ।
कुम्भ : धेरै यात्रा गर्नाले तपाईंलाई उन्मादमा पार्नेछ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्ना घरको श्रृंगारको लागि आफ्नो खाली समय प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंका परिवारले साँच्चै नै यसको कदर गर्नेछ। अरूको हस्तक्षेपले तनाव उत्पन्न हुनेछ। आफ्ना सहकर्मीहरूले तपाईंले सँधैं भन्दा आज राम्रो गरि बुझ्नेछन्। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। एउटा अपरिचितले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच झगडा हुन सक्छ।
मीन : स्वास्थ्यको दृश्यबाट धेरै राम्रो दिन। तपाईंको हँसिलो मनले तपाईंको इच्छित बल दिन्छ र तपाईंलाई विश्वस्त राख्नेछ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो दैनिक तालिकाबाट समय निकालेर आज आफ्ना साथीहरूसँग बाहिर जानुपर्छ। तपाईंको उदास जीवनले तपाईंको जोडीलाई तनाव दिन सक्छ। कला र थिएटरसँग जोडिएकाहरूले आफ्नो रचनात्मक कार्यलाई श्रेष्ठता दिनको लागि धेरै नयाँ अवसर पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछन् भन्ने तपाईं याद हुनु आवश्यक छ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ मंसिर ५ गते बिहीबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर २१
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ मंसिर ४ गते बुधबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर २०
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ मंसिर २ गते सोमबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १८
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी उपनिर्वाचनसम्म मात्रै सरकारमा बस्ने
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ मंसिर १ गते आइतबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १७
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक ३० गते शनिबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १६
पूजा शर्माले भेटिन् पूर्व राजा
महरालाई जेलभित्रै यस्ता सुविधाः कसरी बित्छ उनको दिनचर्या?
ए मेरो हजुर ४ मा अनमोल अनुबन्धित
इन्स्टामा यस्तो फोटो राखेपछि आमिर खानकी छोरीको व्यापक आलोचना
भोजपुरमा नकावधारीले एक महिलाको दुबै स्तन काटिदिएपछि...
प्रहरी र आलमबीच भनाभन: म रौतहट कारागारमा बस्छु, अन्त जान्नँ
सन्दीपको चमत्कारिक बलिङः एकै ओभरमा लिए दुई विकेट
मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भनेः ‘तलब, भत्ता पर्याप्त छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत हुनू’
यातायात मन्त्री महाशेठलाई मन्त्रीबाट हटाएपछि मतदाताले दिपावली मनाए
एक महिलाले जन्माइन् तीन सन्तान
जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै पूर्वसभामुख महरा उच्च अदालतमा